Keligay Aan Noolaado Qaybta 1-Aad | Hangool News	Home
Hangoolnews.com Keligay Aan Noolaado Qaybta 1-Aad
January 7, 2017 - Written by Jumcale Gurey
Waqtiga iyo wacyiga aynu wadaagno wadar iyo waaxid ahaan waa mid noloshii waaqiciga ahayd ee wanaagsanayd inaga wadhfiyay. Aadamuha iyo wixii nool ee isku beer ahiba aragti iyo doonis wadaagis isku mid ah ayaa ka dhaxaysa oo ah in ay noolaadaan. Waqti hore iyo qarniyo hore ayay ahayd doonistaasi, sida ayaamaha iyo sanaduduba isku bedeleen ayay badbaada uu qofi doonayo inuu keligii noolaadana isku bedeshay, markaan saa leeyahay tallow maxaan ku quwaynaya eraygaas meel fog ba hayna gaadhsiin bal dhaqankii suubanihii mahadsanaa ee maxamed N.N.K.H uu bulshadii cawaanka ahayd ee quraysheed uu ilbaxa kaga dhigay ee uu isiro kala fogfog oo faaris iyo xabash ka kala yimid uu ku walaaleeyay bal u fiirso. Tusaalaha 1-aad
Waakan ayuub al ansaari oo saxaabi aanay isku isir ahayn u hibeeyay kala badh hantidiisii kaba sii darane waa kaa gabadhiisii u furay isaga oo naf hur hiil iyo hooba leh la doonayaa saxaabiga,taasuualahaa iyo qaar kaloo badanba waxay ahaayeen naf hur ku salaysan kalgacal,jacayl iyo wada noolaasho guud oo ka dhaxeeyay dad aan isku ab iyo abtirsiin ahayn.
Waa kuwan sadexdii asxaabi R.C ee dagaalkii ku dhaawacmay maxay sameeyeen? Iyagoo sakaarada oo halbawlayaasha dhiiga waraabiya ay halqanayaan ay cuwaaf loo keenay kii koowaad ayaa yidhi walaalkaygan igu xiga u gudbiya kii labaad ayaa isna yidhi walaalkaygan igu xiga u gudbiya kii sadexaad ayaa isna yidhi walaalkaygan igu xiga siiya waxay kusoo noqotay kii koowaad oo dhintay sadexdoodiiba halkii bay ku dhinteen . Nolol qurux,qaayo iyo qiime leh iga dhe intaba.
Maynu ka gayoon karayna, miyaynu ka dhaam karayna oo miyaynu midh-midhaysan karnaaba noloshii naf hurka,naruurada iyo naxariista lahayd ee ay kusoo noolaayeen asxaabtii diintan macaan ina soo gaadhsiiyay.
Waa mar kale iyo duulamdii nabiga N.N.K.H uu horkacayay maaha mid dansan ee waa qaswadii uxud. Muslimkii la jabi nin walba naftii la carar, tiro yar oo kooban oo asxaab ah ayaa difaaca suubanaha u samato baxay, sacad binu abii waqaas waa kan suubanaha N.N.K.H intuu dhabarkiisa ku gudbay rasuulka warmaha,leebabka iyo maqlahaba iskaga dhigay xanuun badana oo xaraarad kululaa maxaa warmo ku dhacaya hadana se waxa kala wayn naf hurida uu suubanahaa quraysheed ee aanay ab iyo isir wadaagin in ay tiisu horayso kaga door bidayo.
Tusaalayaasha, dhacdooyinkaas iyo qisaskaasiba waxay ina tusayaan sida jiilkii ugu khayrka badnaa umadan ee saxaabadii ay nafhurka diimeed eek u dhisan walaaltinimada iyo wax isku ahaanshaha ay u saamaysay darafyada iyo dhinacyada kala duwan ee noloshooda.
Maxaynu kala soo baxaynaa nafhurka diimeed
Diinteenu waxay in badan ina fartay in qof ku waxa aanu naftiisa la jeclayn aanu walaalkii la jeclaan. Inaad naftaada, maalkaaga iyo muraqaagaba aad cid wal oo u baahan aad uga faaidayso waa astaan qurux badan oo sababi lahayd jacayl,jamasho iyo jibo ku dhisan walaaltinimo dhab ah.
Qaybta tan inagu xigta waxaynu kaga hadli doonaa sida dhaqankeena soomaaligu uga hadlay doonista kelinimo ee sharafka iyo shacniga midnaba aan amaan u helin.
Khadar ismaaciil haybe